तीनवटा मन्त्री भएको जिल्ला गुल्मीमा बाढी पीडितहरुको विजोग देखेँ : नेता चन्द्र भण्डारी « News24 : Premium News Channel
तीनवटा मन्त्री भएको जिल्ला गुल्मीमा बाढी पीडितहरुको विजोग देखेँ : नेता चन्द्र भण्डारी
बुटवल। ‘ हुन त परराष्ट्रमन्त्री ज्यु हेलिकप्टर लिएर भेट्न गएको पनि सुने तर गुल्मीको ठुलोलुम्पेक र लिम्घाका बाढि पहिरो पीडततहरुको अवस्था देख्दा त्यहाँ सरकार नभएको महशुस गरेर फर्केको छु’– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले भने–‘ तीन तीन जना मन्त्री भएको जिल्ला हो गुल्मी तर बाढी पीडितहरुको विजोग देखेर आएँ ?’
सोमवार विहान बुटवलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमरा ज्ञवालीलाई कटाक्ष गर्दै प्रति प्रश्न गरे –‘ १५ लाख हेलिकप्टर भाडा तिरेर २० बोरा चामल र ३० वटा टेण्ट लैजाँदैमा त्यहाँका बाढि पीडितहरुको उद्दार होला ?’ उनले सरकारमा तीन तीन वटा मन्त्री भएको जिल्ला गुल्मीमा बाढी पहिरो पीडितको अवस्था देख्दा लज्जाबोध भएको बताए ।
सामुहिक बसाई बसेका त्यहाँका बाढी पहिरो पीडितहरुका वालबालिकाहरुलाई दुधको आवश्यकता छ, कोही बिरामी परेका छन् , औषधि पाउन सकेका छैनन् । सुत्केरीहरुले पोषण पाउन सकेका छैनन्, दालको झोल र भातको भरमा बसेका छौं तरकारीको मुख देख्न पाएका छैनौं भनेर रुवावासी सुने साविक गुल्मीको क्षेत्र नम्वर २ का पूर्व सांसद समेत रहेका नेता भण्डारीले भने–‘ त्यहाँका बाढी पहिरो पीडितहरुको उद्दारका लागि तपाईहरु मिडियाकर्मीको भूमिका देखेको छु तपाईहरु ऐना बनेर ती बाढी पीडितहरुको त्यो विजोग दृश्य देखाई दिनुस् ।
उनले नेकपाको दुई तिहाईको सरकार (आईसियु) कक्षमा जीवन मरणको दोसाँधमा रहेको आरोप लगाए । नेता भण्डारी संगै बाढि पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुगेका नेपाली कांग्रेस गुल्मीका पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले पनि लिम्घा र ठुलोलुम्पेकमा सरकारको न्यून उपस्थिती रहेको आरोप लगाए ।
‘सयौं मानिसहरुको सामुहिक वसाई छ, सुत्केरी र बालबालिकाले पोषण पाएका छैनन् , महामारी फैलिने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ, प्रर्याप्त खान छैन’ – उनले भने । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामीले ठुलोलुम्पेकको उद्धार समितिलाई ३ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्यौं, लिम्घामा एक लाख र मृतकका परिवारहरुलाई पाँच पाँच हजारका दरले सहयोग गर्यौं , साथीहरुले बुटवल लगायतका विभिन्न स्थानमा सहयोग जुटाउँदै हुनुहुन्छ , यति बेला सबै सहयोग संकलनमा जुट्न जरुरी छ ।
त्यहाँ सरकार त कांग्रेस कै छ नि ?
काग्रेस नेताद्धयः भण्डारी र श्रेष्ठले सत्यवती ३ र ४ का बाढL पहिरो पीडितहरुको सरकार नै नभएको महशुस गरेको बताइरहँदा त्यहाँ कसको सरकार छ त ? भनेर प्रश्न गरियो । जवाफः गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकाल सहित अधिकांस वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधीहरु नेपाली कांग्रेस कै छन । के हो तपाईले नेतृत्व गरेको सत्यवती गाउँपालिकामा बेला बाढि पहिरो पीडितहरुले त्यहाँ सरकार नभर्एको महशुस गरेका छन भने र तपाईका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै भन्नु भएको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले भने–‘ उहाँहरु प्रतिपक्ष भएर प्रतिपक्षको भाषा बोल्नु भएको होला तर सत्यवती गाउँपालिकाले उद्धारका लागि कुनै कसुर बाँकी राखेका छैन । ’
‘धमाधम क्याम्पहरु ीनर्माण गर्दै आएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीको टोली शिविरमा परिचालन गरेका छौं । दैनिक खान उपलब्ध गराएका छौं । गाउँमा भए पुगे सम्म तरकारी पनि खुवाउने गरेका छौं । पक्कै पनि उहाँहरु आएको बेला केहि बृद्ध र सुत्केरीहरुले दाल र भात बाहेक तरकारीको मुख देख्न पाएका छैनौं भन्ने आवाज उठेकै हो । यहाँ अभाव भएपछि आज आउन लागेका सिडियो सावलाई तम्घासबाट डेढ दुई क्विन्टल तरकारी हेलिकप्टरमा लिएर आउनुस भनेको छु’– गाउँपालिका अध्यक्ष ढकालले भने ।
एउटै घरमा ६० जनाको बास
पत्यार नलाग्ला कुनै समय दश बाह्र जनाको परिवार बस्ने र हाल खाली रहेको ठुलोलुम्क कसुन्थलाका मोतिप्रसाद श्रीस्कोा घरमा यति बेला ६० जना पाढि पहिरो पीडितहरु अटिनआटाउ भएर भेडा बाख्रा झै कोच्चिएर बसेका छन । जसमा बृद्धा बृद्धा, बालबालिकाहरु सुत्केरी महिलाहरु समेत रहेका छन ।
साविक ठुलोलुम्पेक गाविस वडा नम्वर १ को गजाकोट स्थित नवविहानी प्राथामिक विद्यालयमा ४५ जनाको समुह बसेको छ । किल्लीका पुछारमा १३ जना , गजाकोटको पुरानो विद्यालय नजिक ५२ जना, चारघरे टोलमा ५५ जना बसेका छन । उनीभञ्ज्याङ्गमा ५० जना , काउलेमा ४२ जना , माथी धर्मपुर माविमा २ सय ६ जना ,धर्मपुर प्राविमा ६५ जना , राम माविमा९३ जना , अस्लेवाको मनकामना प्रािवमा ८९ जना बसेका छन ।
साजपुर प्रविमा १ सय ५० जना , कसुन्थलामा ४५ जना , ओखर भन्ने स्थानमा ३७ जना ढुङ्गाचाल्ने भन्ने स्थानमा ५२ जना , कसन्थला तल्लो भेगमा ५० जना , मोतीप्रसादको घरमा ६० र दाङ्गसिंङमा ४४ जना सहित ठुलोलुम्पेकमा मात्रै १२ सय ६० जना विस्थापित भई शरणर्थीको जस्तै जिवनयापन गरिरहेको सत्यवती गाउँपालिका प्रमुख पारिश्वर ढकाल बताउँ छन । उता वडा नम्वर ४ को लिम्घास्थित सरस्वती माविमा करिव डेढ सय जना बस्ने गरेको ढकालले बताए ।
साउन ६ गते विहान करिव ४ बजेबाट गएको पहिरोले त्यस गाउँपालिका वडा नम्वर ३ र ४ मा गरि १३ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा परी आमा र भाई गुमाएका दुई बालिकाहरु गम्भीर घाईते भई परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमरा ज्ञवालीले हेलिकप्टरमा राखेर काठमाण्डौं उपचार गर्न लगेका छन् । सयौ चौपाय, सयौं रोपनी तरकारी खेती पहिरोल बगाएको छ ।
करिव डेढ करोड लाखतमा असार मशान्तमा सम्पन्न भएको अस्लेवाका् नहर पुरै बगाएको छ । त्यहाँका सयौं विघा जमिन बाँझै रहने अवस्था छ । विगतमा खनिएका मोटरबाटाहरुको अवस्था हेरिसक्नु छैन् । अब ती दुई स्थानमा राज्यले कोष खडा गरेर एकिकृत विकासको योजना नल्याए त्यहाँका बासीन्दाको शिर ठाडो हुन नसक्ने नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँ छन ।
नेकपाले आज १२ लाख बराबरको सामग्री लैजाँदै
नेपाली कांग्रेस गुल्मी र त्यस पार्टीका नेता चन्द्र भण्डारीहरुले त बाढि पहिरो पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गरायो तर नेकपा गुल्मीले के गरेको छ त ? भन्ने जिज्ञाषामा त्यस पार्टी गुल्मी जिल्ला सचिव बिरबहादुर कार्की चाहलले सबै भन्दा पहिला सहयोग आफ्नो पार्टीले गरेको दावी गरे । उनले भने- ” हामीले प्रचार मात्रै गर्न नचाहेको हो, सुरुमै हामीले ७० हजार नगद सहयोग लिएर गएका थियौं । दोश्रो पटक ६० हजार नगद र १० क्विन्टल चमल दात तेल लगायतको सामग्री रुद्रवेणीमा लगेर स्टोरिङ्ग गरिरहेका छौं ।”
आज नेता बालसिंह काउछाको टोलीले १२ लाख मुल्य बराबरको सहयोग सामग्री लिएर जाँदै छन् । उनले विभिन्न स्थानीय तह र देश विदेशमा समेत नेकपाले सहयोगअभियान जारी गरेको बताए । प्रेस चैतारी नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालका अनुसार काठमाण्डौमा कम्युनिष्ट निकट सम्पर्क समितिले सत्यवती बाढी पीडितहरुको उद्दारका लागि श्रीप्रसाद पाण्डे र शंकरप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा ३३ सदस्यीय सहयोग संकलन समिति गठन गरेर अभियान छाेडेको छ ।
प्रदेश ५ का सांसद र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा गुल्मी जिल्ला ईञ्चार्ज दिनेश पन्थीको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेकोा भेलाले सहयोग संकलन तीव्र पारेको अर्यालले बताए ।